အနောက်တိုင်း ကြက်ကောင်လုံးကင် »
December 16, 2009 by chowutyee
“Wutyee Food House မှ ကြိုဆိုပါသည်”
Email Subscription : လုပ်ခြင်းဖြင့် ဒီဘလောက်မှာ ဟင်းလျာအသစ်တင်တိုင်း တင်ထားသော ဟင်းလျာများကို အီးမေးက တဆင့်အကြောင်းကြားပေးပါတယ်။
Categories : အောက်မှာ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ ပီဇာ၊ လာအို၊ အနောက်တိုင်း ဟင်းချက်နည်းခွဲ တားပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ချက်နည်းများကို အလွယ်တကူရှာဖွေ နိုင်ပါသည်။
Cooking Method : ၀တ်ရည် ချက်နည်း အဆင့်အဆင့်ကို ပုံတွေနဲ့တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Blog : ဒီဘလောက်ကို တခေါက်ဝင်ကြည့်ပြီးတိုင်း နောက်တခါဝင်ကြည့်ဖို့ရယ်၊ နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းတွေကို share လုပ်ပေးဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော်။ ၀တ်ရည်ဘလောက်ကို ၀င်ကြည့်သူတိုင်း အရှေ့တိုင်း၊ အနောက်တိုင်း ဟင်းလျာများကို ကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်ရင်း ပျော်ရွင်နိုင်ပါစေ ဆုမွန်တောင်းလျှက်……
Posted in အခြား အကြောင်းအရာများ | 47 Comments
on December 16, 2009 at 11:18 am | Reply Hmone Gyi
thx for kindly sharing urs cooking receipt with us… will try to cook whenever u post over there…tuu ma tuu top ma thi puuu heee 😉
on December 17, 2009 at 5:10 pm | Reply Hmone Gyi
anyway i like snow in urs blog 😉
on December 18, 2009 at 3:09 am | Reply chowutyee
I like snow also!!
on January 5, 2010 at 11:42 am | Reply caspertyzin
အမြဲစောင့်ကြည့်နေပါတယ် …. ခုလို ပညာဆည်းပူးခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ဒီထက်မက ပညာဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်နော် ….
on December 15, 2011 at 5:38 am | Reply chowutyee
Thanksalot par.. ၀တ်ရည်ကလည်း ၀တ်ရည် ၀ါသနာပါတဲ့ ဟင်းလည်းချက်ရ၊ သူများကိုလည်း မျှဝေခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. 🙂
on January 6, 2010 at 5:01 am | Reply zaw min
ဝတ်ရည် လာလည်ပါတယ် ၊ နောက်ထပ် တင်မယ့် စားသောက်ဖွယ်ရာများ အတွက်လဲ စောင့်မျှော်နေ
ပါတယ်လို့ ……………………………အမြဲတမ်း ရှင်သန်နေတဲ့ ဘလော့ တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါစေလို့လဲ
တောင်းဆု မေတ္တာ ပို့သပါတယ် ။
on September 6, 2010 at 5:17 am | Reply chowutyee
on January 6, 2010 at 8:22 am | Reply chowutyee
on January 13, 2010 at 5:23 am | Reply Ei Kay
Yee.. I visited your website naw.. Great Job frd, very impressive.
thanks for corn soup and pizzas.
Please keep sharing your great talent and the recipe..
on January 13, 2010 at 5:48 am | Reply chowutyee
ခုလိုလာသွားလို့ ကျေးဇူးပါပဲ သူငယ်ချင်း အိကေ…. နောက်ဒီထက်ပိုပြီး ချက်နည်းတွေတင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်..
on January 16, 2010 at 2:11 pm | Reply N3
ဒီက အစားအသောက် အစားအသောက်ပုံနဲ့ချက်နည်းတွေကုို အမြဲကြည့်ဖြစ်တယ်။
အဆင်ပြေမယ်ဆို ပုံတွေတင်တဲ့အခါ Image size ကို Medium လောက်တင်ပါလား။ ဒါဆို ကြည့်ရတာ ပွဲစွဲဆောင်မှု့ ရှိပြီး ဖတ်တဲ့သူတွေ ချက်စားချင်စိတ် ပိုပေါက်သွားမယ် ထင်တယ်။
on January 17, 2010 at 3:11 am | Reply chowutyee
N3 ပြောတာမှန်ပါတယ်.. ပုံ sizeကိုကြီးကြီး တင်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်တင်ထားတဲ့ပုံတွေအောက် အရမ်းအောက်ဆင်း သွားမှာစိုးလို့ပါ။ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ ပုံကို ပုံအကြီးကြည့်ချင်ရင် ပုံကို click နှိပ်ပြီး အကြီးကြည့်နိုင်ပါတယ် 🙂
on January 19, 2010 at 4:32 am chowutyee
N3 အကြံပေးတဲ့အတိုင်း ပုံတွေကို ပိုကြီးအောင်လုပ်ပြီး တင်ပေးထားပါတယ်… 🙂
on June 4, 2010 at 5:00 am | Reply khin khin nwe
on June 5, 2010 at 3:55 am | Reply chowutyee
Thanks you too, friend.. 🙂
on September 18, 2010 at 11:55 am | Reply မေပယ်လ်
ဟင်းမပြောနဲ့ ရေနွေးတောင် မတည်တတ်သေးတော့
ဒါပေမယ့် ဟိုဘက်က အားပေးရုံနဲ့ အားမရလို့
on September 19, 2010 at 8:04 am | Reply chowutyee
ဟားဟား.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါနော် မေပယ်လ်… ချက်နည်းတွေကြည့်ပြီ ကြိုးစားချက်ကြည့်ပါ့လား.. ကိုယ်တိုင် ချက်တတ်ထားတော့ ကောင်းတာပေ့ါနော်.. 😛
on October 26, 2010 at 5:46 pm | Reply michelle
ညီမ၀တ်ရည်ရဲ့ ချက်နည်းတွေကို မကြာခဏကြည့်ဖြစ်ပါတယ် သိချင်တာတွေရှိရင် ညီမ website မှာရှာဖွေရင်း သင်ယူဖြစ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ၊ ဒါပေမယ့် မုန့်ဟင်းခါးချက်နည်းလေးကို မတွေ့ လို့ မေးပါရစေ၊ အမ ဗမာပြည်က စိန်ဥမုန့်ဟင်းခါးလိုမျိုး ငရုပ်ကောင်းဟင်းရည်စိမ်းစိမ်းလေး စားချင်နေတာ မချက်တတ်လို့ ညီမသိရင် ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ် ၊၊
on November 4, 2010 at 2:14 am | Reply chowutyee
Ma Michelle, ၀တ်ရည်က မုန့်ဟင်းခါးတော့ တခါမှ ကိုယ်တိုင် မချက်စားဖူးဘူး။ ၀ယ်စားဖြစ်တာ များလို့ပါ။ မုန့်ဟင်းခါးချက်နည်း လေ့လာကြည့်ပြီရင် အစ်မကို ချက်နည်း ပြန်ဝေမျှပေးပါမယ်နော်.. ကျေးဇူးပါ.. 😛
on January 5, 2011 at 5:11 pm | Reply saiwaiaung
ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ ၊ ကျနော် အိမ်ပြန် တော့မှာ မို့ အစ်မ့ဆီက ချက်နည်းပြုတ်နည်းထဲက ကိုယ်ကြိုက်တာတွေကို pdf ပြောင်းပြီး သိမ်းသွားပါတယ်။ ကျနော့်ကောင်မလေးက မုန့်စားရရင် ပျော်တတ်တော့ စမ်းချက်ကြည့်မလားလို့… ခုတော့ ကြက်ဥပဲ ကောင်းကောင်းပြုတ်တတ်တယ်… 😛
on January 11, 2011 at 10:46 am | Reply chowutyee
အဆင်ပြေရင် လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. 😀
on April 3, 2011 at 11:13 am | Reply ယမုံ
ဒီ websit လေးကိုအခုမှ သိရတာ သိပ်ကိုဝမ်းသာပြီးကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်…
ချက်နည်းလေးတွေပါ အဆင်သင့်ပါတဲ့အတွက် ပိုပြီးလွယ်ကူအဆင်ပြေပါတယ်…
on May 30, 2011 at 6:30 am | Reply chowutyee
on May 17, 2011 at 12:10 pm | Reply ktc
I like the site very much, so already downloaded the whole site for offline watch
ခုလို အားပေးလို့ ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော်…
on June 17, 2011 at 5:54 am | Reply ချော
ဟင်းချက်ကောင်တဲး့ ၀တ်ရည်လေးကို လူကိုခင်သလို ချက်တဲ့ဟင်းတွေကိုလည်း သိပ်ကြိုက်တယ်လို့
တစ်ချိန်ချိန်မှာ တကယ်စားခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
on June 22, 2011 at 10:18 am | Reply chowutyee
ကျေးဇူးပါ မချောရေ။ တကယ်ကို ကျွေးချင်တာပါ၊ အခွင့်ကြုံရင် ချက်ကျွေးချင်ပါသေးတယ်.. 😀
on June 23, 2011 at 2:20 am | Reply Thet Aung
မ၀တ် ရည် ဆီ ထမင်း ချက် စား တဲ့ နည်း လေး ရှိ ရင် ပြော ပြ ပါ ဦး ဗျာ
on October 5, 2011 at 4:46 am | Reply chowutyee
ဆီထမင်းချက်နည်းက လွယ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ဒယ်ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း)ထည့်၊ ဆီပူလာလျှင် ကြက်သွန်နီထည့်၊ ဆနွင်း(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်) ထည့်ပြီ ခဏနေမှ ကောက်ညှင်းဆန် (နို့ဆီခွက် ၁ခွက်ခွဲ)ထည့်ရုံပါ။ ရေကို ကောက်ညှင်းဆန်မြုပ်ရုံ လက်တဆစ်ခန့် ထည့်ပြီ အရသာအတွက် ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် ထည့်ပေးပါ။ မီးနည်းနည်းဖြင့် အဖုံးအုပ်ပြီ ရေခန်းသွားလျှင် ဆီထမင်းရပါပြီ။ .. 😀
on June 28, 2011 at 2:34 pm | Reply Buzzlight
အားပေးတယ် ဗိုက်ဆာတိုင်းဝင်ကြည့် ဖြစ်တယ် ကိတ်လုပ်တဲ့ ပစည်းအခေါ်အဝေါ်တွေ ထည့် တဲ့ ပစည်းတွေ ကို အင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်မျုိုးလုံးရေးပေးပါလား ရှာရလွယ်အောင်လို့ လေ နောက်ရေခဲမုန့်လုပ်နည်းရော တင်ပေးပါလားဗျာ
on October 5, 2011 at 4:47 am | Reply chowutyee
ကိတ်မုန့်ပစ္စည်းအခေါ်အဝေါ်တွေကို ထည့်ဖြည့်စွက် ရေးပေးပါ့မယ်.. ရေခဲမုန့်တော့ ကိုယ်တိုင် လုပ်စားပြီ ချက်နည်းပါ တင်ပေးလိုက်မယ်နော်.. 😛
on July 9, 2011 at 2:56 am | Reply nang mynt
I hv subscribe my mail address, thanks for sharing
on October 5, 2011 at 4:48 am | Reply chowutyee
on October 25, 2011 at 5:14 pm | Reply jp.myintswe
so many visitors,great thanks.
on November 8, 2011 at 11:58 am | Reply chowutyee
on December 5, 2011 at 7:48 am | Reply htoohtoo
on December 11, 2011 at 10:19 am | Reply chowutyee
ခုလို အားပေးလို့ ၀တ်ရည်ကလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်. 😀
on December 12, 2011 at 7:20 am | Reply areLuu
ဂွတ်ရှယ်ဗျို့ .. ဒီလိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ချက်နည်း ပြုတ်နည်းတွေကို Web Site ပေါ်မှာ စေတနာနဲ့ အခမဲ့ တင်ပေး တဲ့ အတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။
ဒီ Blog SITE လေး အမြဲတမ်း ပိုမို တိုးတက်ပြီး … အဓွန့်ရှည်ပါစေ။
on December 15, 2011 at 5:41 am | Reply chowutyee
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေနော်.. 😛
on January 2, 2012 at 4:05 am | Reply Simon
ကျနော့်ရဲ့ဘလော့မှာပြန်လည်မျှဝေဘို့ခွင်တောင်းပါတယ်၊ ရမရ အကျိုးအကြောင်းလေး
on January 17, 2012 at 10:17 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့။ နောက်ကျမှာ စာပြန်ဖြစ်လို့ ဆော်ရီးနော်။ ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို ဘလောက်မှာ ၀တ်ရည် ဘလောက်က ဟင်းတွေ ပြန်မျှဝေလို့ ရပါတယ်။ တခုပါပဲ ဟင်းပုံအောက်မှာ Ref: http://www.wutyeefoodhouse.com ဆိုတာလေးတော့ ထည့်ပေးပါနော်။ ကျေးဇူးပါနော် ကိုဆိုင်မွန်
on January 30, 2012 at 3:04 am | Reply အန်တီတင့်
ဝတ်ရည်ရေ တီတင့်ဒီကနေ့ တစ်မနက်လုံး ဝတ်ရည်ရဲ့ စားဖိုဆောင်မှာမွှေနေတာလေး))
on February 5, 2012 at 4:13 pm | Reply chowutyee
အန်တီတင့် ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေနော်.. ဒီနေ့တောင် အန်တီတင့်ကို သတိရသေးတယ်။ မချောတောင် ပြန်သွားပြီလား မသိဘူး။ ကျေးဇူးပါ 😀
on February 6, 2012 at 2:18 pm | Reply Htinlin Zaw
အရမ်းကိုအရသာရှိနေမဲ့ဟင်းတွေပါပ၊ဲ မကြာမကြာ ”Wutyee Food House”ကိုလာလည်ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပဲနော်,ဝတ်ရည်တစ်ယောက်ဒီထက်မက အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကို ဆထက်တပိုးတိုးကာဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်း ဝတ်ရည်တို့မိသားစုအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။
on February 8, 2012 at 9:42 am | Reply chowutyee
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ရပါစေနော်။ အားပေးလို့ အထူးကျေးဇူးပါ 😀
on April 30, 2012 at 8:46 am | Reply kyaw khine
သိပ်ကောင်းတဲ့ အကြံဥာဏ်နဲ့ တင်ပြပေးနေတဲ့ မ၀တ်ရည်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း အချက်အပြုတ်ကို လေ့လာနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ခုလည်း စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ လုပ်နေတုန်းပါ။ မ၀တ်ရည်ရဲ့ ဟင်းတွေကို လေ့လာတာ ခုမှ စပြီး သိတာလေ ဒီဘလော့ဂ်ကို ။ နောက်လည်း လေ့လာဖြစ်မှာပါ ။ ကိုယ်သိထားတာနဲ့ မလုံလောက်ဘူးလေ။ ကျွန်တော်က နည်းနည်း လောဘကြီးတယ် အသိပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ပါ။ ကိုယ်မသိတာကို သင်ပြပေးမယ့်လူရှိလို့ကတော့ ကလေးက အစမချန်ဘူး မေးမြန်းပြီး သင်တာပါ။ မ၀တ်ရည်လည်း ပညာတွေ အများကြီး တိုးပွားပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ ။ ဒီဘ၀တင် မဟုတ်ပါဘူးနော် နောင်ဘ၀များထိပါ ခုလို ဖြန့်ဝေပေးနေတာ ပညာပါရမီဖြစ်ပါစေဗျာ
on May 2, 2012 at 11:25 am | Reply chowutyee
Thanks Par Ko Kyaw Khine! 🙂